Channel Tuning - YTV Channel
Home | Channel Tuning
YTV Free To Air Channel ရဲ့ ထုတ်လွှင့်ပြသလျှက်ရှိတဲ့ အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ လက်မလွှတ်တမ်း စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုး ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်မလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက် ရပါတယ်.
Set-top Box ( DVB – T2) စက်နဲ့ ဖမ်းယူမယ်ဆိုရင်
ပထမဦးဆုံး ရီမုမှ Menu ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ….
ထို့နောက် installation ထဲသို့ ဝင်ပါ….
Auto Tuning > Scan ပြုလုပ်ပြီး YTV Channel ကို ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်……
VHF/UHF Antenna နဲ့ ဖမ်းယူမယ်ဆိုရင်
TV မှ Menu ကိုသွားပါ….
Manually အနေနဲ့ ဖမ်းယူကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်
ထို့နောက် Frequency CH 31, 554 MHz ကို ရွေးချယ်ပါ…..
Tuning လုပ်ပြီးတော့ YTV Channel ကို မိမိတို့ရဲ့ TV မှာထည့်သွင်း ကြည့်ရှု အားပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..
အထက်ပါ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြု၍ ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ TV မှာ YTV Channel ကို ထည့်သွင်းပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်သစ်တွေ၊ အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို ကြည့်ရှုရင်း တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေနော်……